ShweMinThar: အဆီလျော့စားရင် သင်တကယ်ဝိတ်ကျမှာလား?
အဆီလျော့စားရင် သင်တကယ်ဝိတ်ကျမှာလား? Vs အဆီတိုးရပ်တန့်မူ့ဖြစ်အောင် စားသောက်ခြင်း
(Cut down fat intake Vs Ketogenic diet)
ဟဲဟဲ!!! အဆီလုံးဝ ၁၀၀% ရှောင်လို့ကွ..ဘီယာလည်းသောက်တော့ဝူးကွ..လေ့ကျင့်ခန်းလည်း နဲနဲပါးပါးလုပ်ရတာပေါ့ကွာ။
🙍🏻ဟယ်! အမ ပိန်သွားတယ်နော်
ဟဲဟဲ!!! ဟုတ်တယ်. အဓိကကတော့..အပြင်ကအဆီနဲ့ကြော်တဲ့ Fast Food တွေရှောင်တာပေါ့။ အိမ်မှာလဲ မြေပဲဆီစစ်စစ်ကို အညာကဆုံနဲ့ကြိတ်တာပို့ပေးတယ်လေ။ လက်ကြိတ်ဆီစစ်စစ်တွေစားတာနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလည်း နဲနဲပါးပါးလုပ်ရတာပေါ့နော်
လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေသူများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်ပေမယ့်လည်း Diet အစားအသောက်ထိန်းချုပ်ခြင်းပြုလုပ်နေသူများရဲ့ ၇၅ ရာနှုန်းတူညီချက်ကတော့ အဆီကျ၊ ဝိတ်ကျဖို့အတွက်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အရတော့ တချို့ကရေတိုအောင်မြင်မူ့ခဏတာကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားပြီး၊ မကြာခင်မှာအလေးချိန်ပြန်လည်မြင့်တက်တယ်။ နောက်ဆုံး တရားခံအဖြစ်ထိုးကျွေးခံ (Scape goat)လိုက်ရတာကတော့ Gym သွားပြီးလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းသွားမလုပ်နဲ့ နားတာနဲ့ အရင်ကထက်ပြန်ဝလာမှာဆိုတဲ့ အရပ်စကားဟာ ကျနော်တို့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားနေကျဒဏ္ဍာရီတပုဒ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုအဆီရှောင်ရင် တကယ်ဘဲဝိတ်ကျမှာလား? မြေပဲဆီစစ်၊ နှမ်းဆီစစ်စစ်စားသုံးရင် တကယ်ဝိတ်ကျမှာလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။ နေ့စဉ်ရှင်သန်နေထိုင်မူ့အတွက်၊ ပြုလုပ်ရတဲ့အစားအသောက်များမှာ နံမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားနေတဲ့ အဆီဟာရှောင်လို့မရပါဘူး။ အဆီကြောင့် နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ သွေးတိုးနှင့်အသည်းအဆီဖုံးခြင်းဖြစ်တတ်ပြီး၊ အသက်တိုတတ်တယ်ဆိုတာ လူကြီးမိဘတွေပြောတာကြားဖူးကြမှာပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုကြစေကာမူ သင်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျကျအဆီအကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီး၊ အဆီဟာကြောက်စရာမဟုတ်ဘဲ အဆီတိုးရပ်တန့်မူ့ဖြစ်စဉ်(Ketosis) နည်းဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေကြောင်းသိရှိစေခြင်းငှာ ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အဆီလို့ပြောတာနဲ့ ဖက်တီးအက်ဆစ် (Fatty Acid), ပြည့်ဝဆီ (Saturated Fatty Acid) နှင့် မပြည့်ဝဆီ (Unsturated Fatty Acid) ဆိုတာသင်ကြားဖူးနေကြဖြစ်မှာပါ။ ပထမဦးဆုံး (Fatty acid)ဖက်တီးအက်ဆစ်ဆိုတာကို အရင်ကွဲပြားစွာသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
#ဖက်တီးအက်ဆစ် (Fatty Acid)ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားလဲ?
ဇီဝဖွဲစည်းမူ့အရ Fatty acid များဟာ မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်းတဆက်တည်း ချိတ်ဆက်ထားသောပုံစံရှိ ကာဘိုဇိုင်းအုပ်စု (Monocarboxylic Acid= R-COOH)အက်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကာဘွန်အက်တမ်များဟာ (even number)စုံဂဏန်းပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးကာဘွန် ၁၆ လုံးမှ၂၄ လုံးအထိပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတဆင့် Fatty Acid ကို ပြည့်ဝဆီ (Saturated Fatty Acid) နဲ့ မပြည့်ဝဆီ (Unsaturated Fatty Acid)ဆိုပြီးထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
#ပြည့်ဝဆီ (Saturated Fatty Acid)
ဖက်တီးအက်ဆစ်ကွင်းဆက်များတွင် ကာဘွန်အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မူ့တွင်(bond) တစ်ခုတည်းရှိသောကြောင့်ပြည့်ဝဆီဟုခေါ်ပါဆိုပါတယ်။ ပြည့်ဝဆီများဖြစ်တည်ပုံ (tail)အမြှီးဟာ အဖြောင့်အဖြစ်တည်ရှိပြီး၊ ထိုသို့ဖြစ်နေမူ့ကြောင့် ပြည့်ဝဆီများဟာ အချင်းချင်းပိုမိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာပေါင်းစည်းမူ့များဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည့်ဝဆီများဖြစ်တဲ့ ဝက်ဆီ၊ အမဲဆီနှင့်တိရိစ္ဆာန်အဆီများဟာ အခန်းအပူချိန်အတွင်းခဲနေတတ်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Boiling Point ရေဆူမှတ်အရ၊ မပြည့်ဝဆီ(Unsaturated Fatty Acid)နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်မြင့်မားပါတယ်။
ပြည့်ဝဆီတွင် (Low Density Lipoprotein) ဟုခေါ်သော LDL Cholosterol များပြားစွာပါဝင်နေမူ့ကြောင့် ဘေးဥပါဒ်ပေးသောအဆီအဖြစ်လူသိများပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ရာနှုန်းပြည့်အမှန်တရားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ LDL Cholosterol ကိုထပ်မံခွဲခြားလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလျှင်၊ VLDL (Very Low Density Lipoprotein)နှင့် Large Fluffy type cholosterol ဆိုပြီး ၂ မျိုးကွဲပြားစွာဖြစ်တည်နေပါတယ်။
#VLDLဟာပမာဏအလွန်သေးငယ်ပြီး၊ အက်ဆစ်အက်တမ်များဟာသိပ်သည်းမူ့မြင့်များလွန်းမူ့ကြောင့်ခြေဖျက်ရန်အလွန်ခက်ခဲပြီး ဘေးဥပါဒ်များစေပါတယ်။
#Large Fluffy ကတော့ အရွယ်အစားပမာဏကြီးမားပြီး၊ ဝါဂွမ်းကဲ့သို့ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်ရှိပါတယ်။ ၎င်းရဲ့တန်းဖိုးကြီးမားမူ့ကတော့ Large Fluffy type cholosterol ဖြင့်ကလာပ်စည်းနံရံများကိုတည်ဆောက်ပြီး၊ ဟော်မုန်းဓါတ်များထွက်ရှိရန်အတွက်လည်း large Flurry ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ ထိုမျှမက နှလုံးရောဂါဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်မူ့များအား၊ အတားအဆီးဖြစ်စေကြောင်း၊ မကြာသေးသောကာလတွင်သုတေသနလေ့လာမူ့စစ်တမ်းများမှတွေ့ရှိထားကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် (Saturated Fats) ပြည့်ဝဆီလို့ခေါ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်များမှရသောအဆီများတွင်အကျိုးပြု Large Fluffy type choloestrol များအများအပြားပါဝင်ခြင်းကြောင့် သွေးအတွင်း LDL ကိုလက်စထရောများပြားနေသည်ဟု၊ ဓါတ်ခွဲခန်းအဖြေထွက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုလျှင် VLDL ကြောင့်လား? အကျိုးပြု Large Fluffy type cholosterol လားဆိုတာထပ်မံစမ်းစစ်ဖို့၊ သတိချပ်ရမယ့် ကိစ္စတခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်သွေးအတွင်း ကိုလက်စထရောပမာဏများပြားတိုင်း စိုးရိမ်စရာမဟုတ်တော့တာ သင်သိလောက်ပြီဟုယူဆပါတယ်။ VLDL များနေရင်တော့ မိသားစုဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးပြီးဓါတုဆေးဝါးများသောက်သုံးခြင်းဖြင့် လျှော့ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
#ပြည့်ဝဆီ(တိရိစ္ဆာန်များမှရသောအဆီ)ရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားမူ့ကတော့ ၎င်းတို့ဖြစ်တည်မူ့ကျစ်လစ်ခြင်း၊ ရေဆူအမှတ်မြင့်မားခြင်းကြောင့် ချက်ပြုတ်စားသောက်ရန်အတွက် ပြင်းထန်သောအပူချိန်ပေးသော်လည်း oxidised မဖြစ်ပေါ်ဘဲ ပြည့်ဝဆီရဲ့ဓါတုဗေဒဂုဏ်သတ္တိများဟာလုံးဝပြောင်းလဲမူ့မရှိပါဘူးလို့ လေ့လာမူ့စစ်တမ်းများကအခိုင်အမာဆိုထားပြန်ပါတယ်။ Saturated Fats ပါဝင်သောအစားအသောက်များမှာ ထောပတ်၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ ဒိန်ခဲ-ချိစ်၊ တိရိစ္ဆာန်အသားများနှင့်တွဲကပ်လျက်ရှိသောအဆီ၊ ဝမ်းတွင်းကလီစာများ၊ အသင့်စားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားသော အသားပြား (Bacon)စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
#အသွင်ပြောင်း အဆီ (Trans Fat)
Trans Fat လို့ခေါ်တဲ့တာရှည်ခံပြုလုပ်ထားသောအသွင်ပြောင်း အဆီကိုအသီးအရွက်အဆီများနှင့် သဘာဝပစ္စည်း များဖြစ်သော နို့ထွက်ပစ္စည်းများကိုတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထည့်သွင်း၍ ကြာရှည်အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန် စီမံပြုလုပ်ထားသော နို့ဆီ၊ ဒိန်ခဲ၊ ထောပတ်၊ စားအုန်းဆီ၊ မာဂျရင်းကဲ့သို့သောအဆီများဖြစ်ကြသည်။
ပြည့်ဝဆီ (Saturated Fats)နှင့် တာရှည်ခံပြုလုပ်ထားသော အသွင်းပြောင်းအဆီ (Trans Fats) မတူညီကြပါဘူး။ တူညီတာကတော့ Saturated fat နှင့် trans fats များကို စားသုံးခြင်းဖြင့် သွေးတွင်းမကောင်းသော cholesterol များဖြစ်သော LDL cholesterol နှင့် triglyceride များစေခြင်း၊ အကျိုးပြု cholesterol ဖြစ်သော HDL cholesterol ကို နည်းစေခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ Trans Fats ကတော့ကျန်းမာရေးအတွက် မည်သည့်ကောင်းကျိုးမျှမဖြစ်စေဘဲ ဆိုးကျိုးများသာဖြစ်စေတတ်ကြောင်း ဆောင်းပါးရေးသားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
#မပြည့်ဝဆီ (Unsaturated Fatty Acid)
ဖက်တီးအက်ဆစ်ကွင်းဆက်များတွင် ကာဘွန်အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မူ့တွင်(bond) တစ်ခုထက်မကရှိသောကြောင့်မပြည့်ဝဆီဟုခေါ်ပါဆိုပါတယ်။ Double bond တွေများပြားခြင်းကြောင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါဝင်မူ့မှာပြည့်ဝဆီနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါကနည်းပါးစွာပါဝင်ပါတယ်။ အထက်မှာဆိုခဲ့သလို bond တွေဟာတခုမကပါဝင်သည်ဆိုပေမယ့်လည်း double bond တခုသာပါဝင်ခြင်းဖြစ်စဉ်အားmonounsaturated လို့ ခေါ်ပြီး တခုထက်ပိုသောဖြစ်စဉ်အား polyunsaturated လို့ခေါ်ပါတယ်။ ထိုအတူ Bond များပြားစွာဖြစ်တည်မူ့ဟာလည်း ၎င်းတို့အချင်းချင်း ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ပေါင်းစပ်မူ့အတွက် အခွင့်အရေးနည်းပါးစေသောအကြောင်းအရင်းတွင် တခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မပြည့်ဝဆီများဟာ room temperature အခန်းအပူချိန်အတွင်းခဲသွားနိုင်ခြင်းမရှိပဲ၊ Boiling Point ရေဆူမှတ်ကလည်း ပြည့်ဝဆီထက်နိမ့်ကျပါတယ်။ Unsaturated Fatsကိုကောင်းသောအဆီ(သို့)မပြည့်ဝအဆီဟုလူသိများပြီး၊ ၎င်းပါဝင်သောဆီများမှာ ၊ပြောင်းဖူးဆီ၊သံလွင်ဆီ၊မြေပဲဆီ၊ နှမ်းဆီနှင့်အသီးအရွက်အဆီများဟာ မပြည့်ဝဆီဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းသောအဆီ(သို့) မပြည့်ဝဆီ(အသီးအနှံ၊အစေ့များမှရရှိသော)ဟာ၊ ကျစ်လစ်မူ့နည်းပါးစွာဖြစ်တည်မူ့ကြောင့် မီးအပူချိန်ဖြင့်ပေါင်းစပ်သည့်အခါတွင် oxidised ဖြစ်ကာဓါတုဗေဒသတ္တိများပျက်ပြယ်ပြီး၊ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်း (ကိုယ်တွင်း)ယောင်ကိုင်းစေသောဓါတ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲစေကြောင်း ဆေးပညာရှင်များလေ့လာမူ့အရဆိုထားပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်မအများစု ရှေးယိုးစွဲလှေနံဒါးထစ်ယုံကြည်ထားတာကတော့ အသားငါးဖြစ်ဖြစ်၊ အသီအရွက်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆီများများသုံးပြီး နူးအိသွားအောင်ချက်ပြုတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ချက်ပြုတ်နည်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးသေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မီးပြင်းပြင်းဖြင့်ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် oxidised ဖြစ်ကာ အဟာရဓါတ်များပျက်ပြယ်ပြီး မည်သည့်ကောင်းကျိုးမျှမဖြစ်စေဘဲ၊ ဗိုက်ပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ရလာဒ်တခုဖြစ်စေခဲ့တာ ဒီနေ့အထိသတိမပြုမိသေးပါဘူး။ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံများနှင့် ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်အတန်းရှိဟော်တယ်အစားအစာများမှာတော့ အသီးအရွက်အားမူလအရောင်ပြောင်းလဲသွားအောင်မချက်ပြုတ်ကျသလို၊ အသားငါးများကိုလည်း နူးအိအောင်မချက်ကြပါဘူး။ ချွင်းချက်အနေနှင့် မြန်မာပြည်ကကြုံရာစားအိမ်မွေးဝက်သားအကြောင်းမဆွေးနွေးလိုပါဘူး။
ဥပမာ။ Beef Steak အမဲသားကင်မှာစားမယ်ဆိုလျှင် ဒါးဖြင့်လှီးလိုက်တာနဲ့အတွင်းပိုင်းမှာသွေးအနည်းငယ်ထွက်နေတာမြင်တွေ့ရမှပါ။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဟု သင်ယုံကြည်ထားသော ပဲဆီ၊နှမ်းဆီများဟာ ချက်ပြုတ်၊ကြော်လှော်စားသုံးခြင်းထက် အသုပ်ကဲ့သို့သောအပူချိန်မီးဖြင့်တွေ့ထိရန်မလိုအပ်သောနည်းဖြင့်သာစားသုံးသင့်ကြောင်း သတိပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်။ နှမ်းဆီစစ်၊ ပဲဆီစစ်စားသုံးတိုင်း ကျန်းမာရေးဘေးဥပါဒ်ကင်းဝေးတယ်ဆိုတာ အမှန်တရားမဟုတ်တာသင်သိလောက်ပါပြီ။
ကောင်းပြီ၊ အဆီဖြစ်တည်မူ့နှင့်အတူ၎င်းတို့ရဲ့မတူညီသောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် အဆီစားတိုင်းနှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါရစေတယ်ဆိုတာဟာထင်ယောင်ထင်မှားဒဏ္ဍာရီတခုဖြစ်သွားပြီဆိုတာ သင်ထဲထဲဝင်ဝင်သိပြီဆိုရင် Ketosis လို့ခေါ်တဲ့ အဆီတိုးရပ်တန့်မူ့ဖြစ်စဉ် (သို့) အဆီတိုးရပ်တန့်သွားအောင်စားသောက်ခြင်း(Ketogenic diet)အကြောင်းတဆင့်တက်ပြီးဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရအောင်။
အကျဉ်းချုံ့ အားဖြင့်နေ့စဉ်စားသုံးနေထိုင်မူ့ကြောင့် ကိုယ်အတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ ကယ်လိုရီ(စွမ်းအင်) ဟာလောင်ကျွမ်းပြစ်နိုင်သောပမာဏထက်ပိုလျှံနေခြင်းကြောင့်၊ ကိုယ်ခန္ဓာမှတချိန်လိုအပ်လျှင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အဆီအဖြစ်ပုံစံပြောင်းသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြင့် အဆီများစုဝေးများပြားလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တမျိုးနားလည်ထားရမှာကတော့ ပန်ကရိယလို့ခေါ်တဲ့ သရက်ရွက်မှထုတ်လွတ်သော(Insulin) အင်ဆူလင်ဆိုတဲ့တည်ဆောက်ရေးဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ သွေးအတွင်းကစီဓါတ်နှင့်အချိုဓါတ်စားသုံးမူ့ကြောင့်သကြားဓါတ်များပြားစွာဝင်ရောက်လာသည်နှင်တပြိုင်နက်၊ အင်ဆူလင်ထွက်ပေါ်လာပြီး Glucose များအားဆဲလ်အတွင်းသိမ်းဆည်းယူပြီး၊ ပိုလျှံသည်များကိုအဆီအဖြစ်ဖြိုကွဲပြီး၊ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်းအချို့နေရာများတွင်သိုလှောင်ထားလိုက်ပါတယ်။ အင်ဆူလင်ထွက်ရှိမူ့ပမာဏအနည်းအများဟာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တုန့်ပြန်မူ့အပေါ်တိုက်ရိုက်မူတည်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အင်ဆူလင်တုန့်ပြန်မူ့ကောင်လျှင် အနည်းငယ်ဘဲထွက်ရှိပြီး၊ အင်ဆူလင်တုန်ပြန်မူ့မကောင်းလျှင် အင်ဆူလင်အများအပြားထုတ်လုပ်ရပြီး၊ အချို့ glucose များအားအဆီအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခြင်းဖြင့်အဆီတိုး၊ အဆီစုဆောင်းခြင်းများဖြစ်စေပါတယ်။
ဇီဝကမ္မဖြစ်ပျက်မူ့များမှပိုလျှံလာသော အဆီများအားကိုယ်တွင်းကလီစာများ (နှလုံး၊ အဆုတ်၊ အသည်းအပါအဝင် အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်)၊ရင်ဘတ်နှင့်ခါးဘေးပါတ်လည်၊ ပေါင်၊ တင်ပါး၊ ဝမ်းဗိုက်များရှိအရေပြားအောက်ဘက်တွင် ပျော့ပြောင်းသောအဆီလွှာအဖြစ်စုနေတတ်ကြပါတယ်။ တိတိကျကျပြောရမည်ဆိုလျှင် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းစုဆောင်းတတ်သောအဆီအမျိုးအစား ၃ မျိုးရှိပါတယ်။
၁- Triglycerides (ထရွိုင်-ဂလစ်စထွိုက်စ်) -သွေးအတွင်းစီးဝင်နိုင်သောအဆီ
၂- Subcutaneous Fat- အသားအရေပြားအောက်တွင် တိုက်ရိုက်စုဖွဲတည်ရှိနေသောအဆီ။ ၎င်းအဆီစုအားလက်ဖြင့်ဖမ်းဆုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၃- Visceral Fat- အန္တရယ်ရှိသောအဆီ၊ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းပိုင်း ကြွက်သားအောက်တွင်တည်ရှိသောအဆီ တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
အချို့ Visceral fat အဆီဟာလိုအပ်ပေမယ့်၊ အလွန့်အကျွံများပြားနေမည်ဆိုလျှင်တော့ ကျန်းမားရေးပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာပါတ်လည်အားတိုင်းတာခြင်းဖြင့် အလွန့်အကျွံဗိုက်အဆီစုဝေးမူ့ဖြစ်မဖြစ်ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများအတွက် ခါး ၈၀ စင်တီမီတာ(၃၁.၅လက္မ)နှင့် အမျိုးသားများအတွက် ၉၄ စင်တီမီတာ(၃၇လက္မ)ထက်ကျော်လွန်နေလျှင်တော့ ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ခေါင်းမာတဲ့အဆီ (Stubbron Fat) ဟာလောင်ကျွမ်းဖို့ခက်ခဲရတာလဲ?
အဆီလောင်ကျွမ်းဖို့ ခက်ခဲရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုသိဖို့ဆိုရင် ဇီဝဗေဒအကြောင်းအနည်းငယ်သိဖို့လိုအပ်ပြန်ပါတယ်။ အဆီလောင်ကျွမ်းမူ့ဖြစ်စဉ်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်၂ ဆင့်ပြီးမြောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
#Lipolysis လို့ခေါ်တဲ့အဆီပြိုကွဲမူ့ဖြစ်စဉ်မှာ သွေးအတွင်းသို့၊ သိုလှောင်ထားသောအဆီမှ အဆီမော်လီကျူးများထုတ်လွတ်ခြင်းနှင့်
#Oxidation လို့ခေါ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်နှင့်ဓါတ်ပေါင်းပြုမူဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် သိုလှောင်ထားသောအဆီများအားလောင်ကျွမ်းမူ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆီများဟာမည်သည့်နေရာများတွင်မည်သို့ပင်စုနေပါစေ၊ အဓိကတရာခံကတော့ကျနော်တို့ရဲ့ မှားယွင်းစွာပြုမူနေထိုင်စားသောက်မူ့ကြောင့်ဘဲဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့နေ့စဉ်စားသုံးမူ့မှာ ဘာတွေပါဝင်လဲ?
အမျိုးမျိုးသောစားသောက်မူ့များမှ အသားဓါတ်(Protein)၊ ကစီဓါတ် (Carbohydrate)နှင့် အဆီဓါတ် (Fat) တို့အားကိုယ်ခန္ဓာမှလက်ခံရရှိပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာယန္တရား(စိတ်၊ကိုယ်ခန္တာ)အဆက်မပြတ်လည်ပါတ်နေဖို့အတွက် အဓိကစွမ်းအင်ကို ကစီဓါတ် (Crabs)မှရရှိပြီး၊ ဒုတိယစွမ်းအင်အဖြစ် အဆီဓါတ် (Fat)မှရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Diet ဆိုတဲ့အစားအသောက်ထိန်းချုပ်စားသောက်မူ့အစီအစဉ် (program)တိုင်းတွင်ပရိုတိန်းဓါတ်ပမာဏဟာပုံသေအမြဲဖြစ်ပြီး၊ ကယ်လိုရီစွမ်းအင်များပြားသော ကစီ (Crabs) နှင့် အဆီ (Fat) ကိုပြောင်းပြန်အချိုးကျပြောင်းလဲရေးဆွဲတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ။ ကစီဓါတ်များလျှင် အဆီလျော့၊ အဆီများလျှင်ကစီဓါတ်လျော့စား (အသားဓါတ် ၂၀ + ကစီ ၁၀ + အဆီ ၇၀ (သို့) အသားဓါတ် ၂၀ + ကစီ ၅ + အဆီ ၇၅)
အဆီတိုးရပ်တန့်မူ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာကတော့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များထဲမှ ကိုယ်ခန္ဓာဆဲလ်များမှစွမ်းအင်အဖြစ် (Blood sugar) သကြားဓါတ်လိုအပ်ချိန်တွင်၊ လက်ခံရရှိမူ့အားတားဆီးကန့်သတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အဆီဓါတ်အား (energy)စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး၊ တွန်းအားပေးလောင်ကြွမ်းစေသောဖြစ်စဉ်ဟုမှတ်ယူနားလည်ပါ။
Ketosis-ကီတိုးဆစ် ဖြစ်စဉ်အတွင်း သိမ်းဆည်းထားသောအဆီများမှ စွမ်းအင်အဖြစ်ပြိုကွဲပြီး ထွက်ပေါ်လာသောအက်ဆစ်အား Ketones -ကီတုန်းအက်ဆစ်ဟုခေါ်ပါတယ်။ သင်ဟာကျန်မာပြီး၊ အဟာရမျှမျှတတစားသုံးသူဆိုရင်တော့ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှလောင်ကျွမ်းနိုင်မည့်အဆီပမာဏကိုကောင်းမွန်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် Ketones အက်ဆစ်ကိုအသုံးပြုဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ်ဘဲ သင်ဟာလိုအပ်တဲ့ကယ်လိုရီပမာဏ(သို့)ကစီဓါတ်ကိုဖြတ်တောက်ပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့၊ ကိုယ်ခန္ဓာမှစွမ်းအင်ရရှိဖို့အတွက် Ketosis လို့ခေါ်တဲ့ အဆီတိုးရပ်တန့်မူ့ဖြစ်စဉ်အားသဘာဝနည်းအတိုင်းအလိုလျောက်ပြောင်းလဲပေးရပါတယ်။ အဆီရပ်တန့်မူ့ဖြစ်စဉ် (Ketosis)ဟာ အများသောအားဖြင့် Ketogenic Diet အစားအသောက်ပုံစံနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိပါတယ်။
အဆီတိုးရပ်တန့်မူ့ (Ketosis) ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစားသောက်မလဲ?
ဒီကိစ္စအတွက်ကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါဘဲ။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့လူတယောက်အတွက် ယေဘူယျ ကယ်လိုရီ ၂၀၀၀ ခန့်နေ့စဉ်လိုအပ်ပါတယ်။ ကာဗိုဟိုက်ဒြိတ်လို့ခေါ်တဲ့ ကစီဓါတ်စားသုံးမူ့၊ လက်ခံရရှိမူ့အား ၅-၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ် ရက်ခြား ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်ဖြစ်ပျက်နေသော ဇီဝကမ္မဖြစ်ပျက်မူ့များအား လမ်းကြောင်းပြောင်းစေပါတယ်။ ကယ်လိုရီ ၂၀၀၀ ပြည့်အောင်မစားပဲ လျော့ချဖို့ပြုလုပ်နေချိန်ကို Ketosis အဆီတိုးရပ်တန့်ဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကစီဓါတ်အဝင်ဖြတ်တောက်လိုက်ပေမယ့်လည်း မူလတည်ရှိနေသောအဆီဓါတ်များ လျှင်မြန်စွာဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေဖို့ဆိုရင်တော့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားနှင့် တွဲလုပ်ခြင်းသာလျှင်သင့်တော်ဆုံးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကစီဓါတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းဟာ ရေတို ကာလ (အများဆုံး ၁၄ရက်) အတွက်သာသင့်တော်ပြီး ရေရှည်အတွက်ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးပိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
#ပါးစပ်အနံမကောင်းခြင်း (acetone level ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်)
#ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမူ့ကာကွယ်ရန် ရေများများသောက်ပါ။ အရိုးများနှင့်ချက်ပြုတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်စွပ်ပြုပ်များများစားပါ။
#ထိရောက်မူ့ပိုမိုဖြစ်စေဖို့အတွက် အစာမစားခင်ပြင်းအားဖြင့်ကစားသောလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါ။ (Ketosis ပြုလုပ်ချိန်အတွက်သာအကြုံးဝင်ပါတယ်)
#ကစီဓါတ် ၅-၁၀% အဖြစ်ထားပြီး၊ အဆီ ၇၀-၇၅% စားသုံးပါ။
#တနေ့ ၃ ကြိမ်ထက်ပိုပြီးမစားရပါ။
#ခေါင်းမာသောအဆီများအားလှုံဆော်နိုင်ရန်အတွက် ရေပူ၊ရေအေးဖြင့်ချိုးပါ။ ရေနွေးငွေ့ဖြင့် Spa, Steam ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
#အိပ်ချိန် ၇-၉ နာရီအထိရအောင်အိပ်စက်ပါ။ ကောင်းမွန်စွာအိပ်မပျော်ခြင်းကြောင့် Stress Hormone များထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
အဆီတိုးရပ်တန့်မူ့ဖြစ်အောင် စားသောက်ခြင်းပုံစံ (Ketogenic Diet Plan)
#မနက်စာ- ထောပါတ်သီး ၁ လုံး+အသားပြား (သို့) ထောပါတ်သီး+တူနာငါးသေတ္တာငါး
#မနက်စာ- အုန်းသီးစိတ် (တခြမ်း)
#နေ့လည်စာ- ပင်လယ်ငါး၊ ပုဇွန်ဟင်း
#ညစာ- ကြက်ဥ+ကြက်သွန်နီမွေကြော်၊ Lean Sausage ရရာ
#မနက်စာ- ထောပါတ်သီး ၁ လုံး (သို့) သီဟိုစေ့+သံလွင်ဆီ စားပွဲတင် ၁ ဇွန်း
#ညစာ-အမဲရိုး၊ ဆိတ်ရိုးရရာစွတ်ပြုတ် ၁ ခွက်
#နံနက်စာ- အမဲရိုး၊ ဆိတ်ရိုးရရာစွတ်ပြုတ် ၁ ခွက်
#နေ့လည်စာ- အမဲနံရိုးကင်၊ ဝက်နံရိုးကင်ရရာ
#ညစာ-ကက်ဥ+ကြက်သွန်နီမွေကြော်၊ Lean Sausage ရရာ
မှတ်ချက်။ Diet Plan ကိုသင့်စားသောက်မူ့နှင့်အဆင်ပြေရာကို ရွေးခြယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး၊ စားသောက်ရမည့်ပမာဏကိုလည်း ကြိုက်သလိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ အထူးဂရုပြုရမည့်အချက်ကတော့ ကာဗိုဟိုက်ဒြိတ်-ကစီဓါတ်အနည်းဆုံး ၅-၁၀% + အဆီ ၇၀-၇၅%+ အသားဓါတ် ၂၀% ဖြစ်နေစေဖို့သာလျှင်အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းများ (၁ ရက်ခြား)
#သွေးပူ ၃-၄ မိနစ်
#ပြေးစက်ပေါ်ပြေးခြင်း (၁၅-၃၀ မိနစ်)
#ပြင်ညီဒိုက်ထိုး ၁၀ ကြိမ်
#ထိုင်ထအမြင့်ခုန်(Burpee) ၅-၁၀ ကြိမ်
#Spider Plank ၁၂-၁၅ ကြိမ်
#Jump Squat ၁၀ ကြိမ်
#ကြိုက်နှစ်သက်ရာ HIIT လေ့ကျင့်ခန်း ၁၀-၁၅မိနစ်
အထက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းများဟာ Ketosis ဖြစ်စဉ်အတွင်းသတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူး။ ကစီဓါတ်ဖြတ်တောက်မူ့ကြောင့်အားနည်းနေမှာဖြစ်မှာမလွဲမသေပါဘဲ။ ဒါကြောင့် သင်နှင့်သင့်တော်သလို Intensity ပြင်းအားပြောင်းလဲလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
#Diabetes Types 1- ဖြစ်နေသူများအဖို့ အချိုဓါတ်ကိုထိန်းညှိပေးတဲ့ သရက်ရွက်ကနေ Insulin ဟော်မုန်းမထုတ်နိုင်တာကြောင့် ကစီဓါတ်ဖြတ်တောက်မူ့ အဆီတိုးရပ်တန်အောင်စားသောက်နေထိုင်မူ့ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အထူးသတိထားရန်လိုအပ်ပြီး၊ မိသားစုဆရာဝန်ဖြင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး၊ Diet အတွက်အကြံဉာဏ်များရယူပါ။
#Diabetes Type 2- ဖြစ်နေသူများအဖို့တော့ Insulin ဟော်မုန်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိနေတာဖြစ်တာကြောင့် ကစီဓါတ်ဖြတ်တောက်ပြီးအဆီတိုးရပ်တန့်အောင်စားသောက်နေထိုင်ခြင်းဟာ အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
#Statuated Fat-ပြည့်ဝဆီ(သို့) မကောင်းသောအဆီ (တိရိစ္ဆာန်များမှရသောအဆီ) ဟာမီးဖြင့်ချက်ပြုတ်သော်လည်း အောက်ဆီဒိုက်မဖြစ်စေဘဲ၊ မူလဓါတုစွမ်းအင်များပြောင်းလဲခြင်းမဖြစ်စေပါဘူး။ ၁၀၀% ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘဲ၊ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်လေဖြတ်ခြင်းတို့မှ အကာအကွယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ဆေးပညာလေ့လာတွေ့ရှိမူ့မှတ်တမ်းများကဆိုထားပါတယ်။
#အဆီစားသုံးခြင်းကြောင့် သွေးအတွင်းကိုလက်စထရောများပြားဖြစ်စဉ်တိုင်းဟာစိုးရိမ်စရာမဟုတ်သလို၊ VLDL များပြားခြင်းလား၊ Large Fluffy Type ကိုလက်စထရောများပြားခြင်းလားထပ်မံစမ်းစစ်ယူပါ။
#Unsaturated Fat-မပြည့်ဝဆီ(သို့) ကောင်းသောအဆီ (အသီးအရွက်၊အနှံ၊အစေ့များမှရသော) ပဲဆီ၊နှမ်းဆီ၊သံလွင်ဆီများအားမီးဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရပါမည်။ အသုပ်ပြုလုပ်ရာတွင်သာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
#Trans Fat-တာရှည်ခံပြုလုပ်အဆီဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးအတွက်လုံးဝမဖြစ်စေပါဘူး။
#Ketosis အဆီတိုးရပ်တန့်မူ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်အောင်စားသုံးခြင်းဟာ ရေတို ၁၄ ရက်အတွက်သာသင့်တော်ပြီး၊ ရေရှည်စွဲမြဲစွာမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ အဆီဆက်လက်လျော့ကျနေဖို့ဆိုရင်တော့ အခြားDiet Method (Slow Crab Diet)တခုပြောင်းသုံးသင့်ပါကြောင်းနှင့် ကျန်းမာသောကိုယ်ခန္ဓာပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်း နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။
၁၆ ဂျူလိုင် ၂၀၁၇ (SGT 15:10)
[လေ့ကျင့်ခန်း၊ အစားအစာ၊ အဆီချခြင်းနှင့် Workout ဝါသနာပါသူများအတွက် ဆောင်းပါးများ ဆက်ဖတ်လိုပါက GYM_Professor page ထဲ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း။ ]